Pang Moakun sy ilay vehivavy eo amin'ny mofomamy | Famoronana an-tserasera
Herinandro iray ho an'ny iray ode ho an'ny vehivavy ary ho an-dravehivavy. Vicente Romero, Alarobia lasa teo, Tordesillas, Alakamisy ary Sai tamin'io andro io ihany fikomiana voajanahary.
Tonga dia mankany amin'ny tsy manam-paharoa hatsaran-tarehy ny mofomamy an'i Pang Maokun, ny fitiavany fitaratra eo amin'ny fitaratra, ny fiainana isan'andro amin'ny sofa na ny taonan'ny fahatanorana. Mpamaritra sy teny maromaro hamaritana zavatra amin'ny sangan'asan'i Maokun kanto, liana amin'ny mofomamy.
I Pang Maokun dia teraka tany Chongqing, Sina tamin'ny 1963 ary ny azy no mazoto kokoa fikarohana ara-panahy mahaleo tena ary famoronana zavakanto. Azontsika atao izany amin'ny asa samihafa izay ahitantsika ny antony sy ny fomba samihafa. Mpandoko iray izay tsy te hijanona amin'ny toerana mampionona azy, fa kosa mitady ny hafa, na amin'ny fahaverezan'ny tenany na amin'ny fahitana azy indray, toa an'i Phoenix.
Maoukun dia nahazo diplaoma tao amin'ny Sichuan Academy of Fine Arts Subsidiary tamin'ny 1981 ho lasa profesora nanomboka tamin'ny 1993, satria afaka nanoratra aho. Ny vehivavy no ivon'ny fihaonany amin'ny ankamaroan'ny sanganasany. Pinta ho an'io vehivavy io amin'ny fihetsem-pony ary ny velaran-tany mankany amin'ny halaliny izay mety hidika raha mihazona ny tany isika.
Manana ny tranonkalanao ianao avy amin'ity rohy ity, izay ahitanao ny fampirantiany koa. Vintana lehibe afaka mandinika an'io vehivavy manokana io ary lavitra amin'ny asany maro be. Toy ilay kintana hita amin'ny alina tianao hikasika, fa taona vitsivitsy miala aminy.
Avy amin'ny tranonkalany manokana i Maokun manazava ampahany amin'ny anjarany na antony nahatonga azy ho ho an'ny loko sy ny fitsaboana manokana ny mofomamy. Sary hosodoko iray izay azo fantarina tsara ary azontsika itodihana amin'ny fotoana hafa amin'ny alàlan'ireto habaka virtoaly ireto. Sary hosodoko sinoa mahaleo tena sy ara-panahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Vadin'i Pang Maokun
Tena tsara tokoa.